उल्टो pleats संग स्कर्ट। कसरी सी गर्न?
गोठभित्र मा स्कर्ट वोग फेरि। यो सिजन मा सानो र ठूलो Folds संग फेसनदार मोडेल छन्। यो हुन सक्छ एक सीधा पेन्सिल स्कर्ट एक जोडी को रियर, conversely, अगाडि Folds वा।
पसलहरुमा तपाईं कुनै पनि तस्बिर लागि उपयुक्त हो कि विभिन्न मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म ताजा र उज्ज्वल युवा हेर्न चाहनुहुन्छ - एक flared स्कर्ट ध्यान गर्नुपर्छ। एक व्यापार शैली सुट मोडेल गोडा-लम्बाइ, सीधा, सानो pleats साथ। चिसो मौसम लागि बाक्लो कपडा बनेको स्कर्ट, छनौट गर्नुपर्छ।
गर्मी सोख राम्रो प्रकाश को लागि, कपडे बगिरहेको। लोकप्रियता पहिलो स्थानमा मोडेल को एक किसिम बीचमा उल्टो pleats संग स्कर्ट सारियो। यस्तो Folds यसलाई आसन्न तिर तैनाथ रूपमा। 7-सेमी - तिनीहरूले धेरै संकीर्ण,3भन्दा कम सेन्टिमिटर, व्यापक देखि, फरक चौडाइ को हुन सक्छ। स्कर्ट टकराने Folds कुनै पनि लम्बाइ को हुन सक्छ।
कसरी सी गर्न?
यसलाई स्वतन्त्र गर्न सम्भव छ एक स्कर्ट सी उल्टो pleats संग? हो, को पाठ्यक्रम, सम्भव। यो एक एकदम सरल उत्पादन हो, र उहाँलाई सामना पनि साईट seamstress।
तपाईं कपडे, मुद्दा, सुई, सिलाई मिसिन, पिन, चक र एक टेप उपाय टुक्रा आवश्यक हुनेछ। एक स्कर्ट कसरी सी गर्न उल्टो pleats संग? यो उद्देश्य लागि, कपडा लम्बाइ चाहेको उत्पादन प्लस सिउनी भत्ता स्थगित। तल दुई सेन्टिमिटर को भत्ता। 1.5 सेन्टिमिटर द्वारा - अन्य पक्षमा। त्यसपछि गुना राख्नु। यो गर्न, एउटै चौडाइ मा tucks कपडा, तर दुवै दिशामा। को crease आधार सामाग्री को सतह बढ्दो जस्तो हुनुपर्छ। धेरै संकीर्ण Folds नगर्नुहोस्। तिनीहरूले ठीक गठन गर्ने एकदम कठिन छन्। इष्टतम चौडाइ5सेन्टिमिटर छ।
स्कर्ट कसरी सिलना आफ्नो हातमा उल्टो pleats संग? Folds को गठन पछि अनुभवी seamstresses उनको पिन सखाप। त्यसपछि फलामको फलाम गर्न। तर तपाईं हल्कासित 2-3 सेमी मा दुवै पक्षले यसलाई कीला गर्न निश्चित गर्न बस। र त्यसपछि मात्र फलाम फलाम। यस्तो तत्व समय समयमा एक कमर कपडा लागू, कम्तिमा6गरिनु पर्छ। pleats संग कपडा फसल जब कमर को सम्पूर्ण लम्बाइ सम्झना हुनेछ, तीन चार सेन्टिमिटर दबाव उत्पादनहरु बनाउन, वस्तु प्राप्त गर्न कटौती र सिले गर्न सकिन्छ।
हामी बेल्ट र समाप्त विनिर्माण स्कर्ट गर्दै
अर्को वस्तु स्कर्ट को बेल्ट हुनेछ। यस को लागि यो चौडाई मा र कमर को मंडल प्लस दुई तीन सेन्टिमिटर र दबाव फिट बराबर लम्बाइमा 10 सेमी नाप्ने कपडा टुक्रा कटौती गर्न आवश्यक छ। के अर्को के गर्ने? बेल्ट लम्बाइ साथ आधा जोडेको र फलाम ironed। त्यसपछि स्कर्ट को अगाडि भागमा छ जो क्षेत्र, यसलाई आवश्यक टक गर्न 0.5 सेन्टिमिटर गुना र कीला मुद्दा छ। एउटै बेल्ट को गलत पक्ष संग गरेको छ। भित्र बाट पार्श्व भाग सिलाई गर्न एक सिलाई मेशिन। त्यसपछि बारी र पनि फेरि ironed। भित्र परिणामस्वरूप बेल्ट को स्कर्ट (शीर्ष Folds) को मुख्य भाग सम्मिलित र प्रत्येक अन्य दुई भागहरू कीला। गलत पक्षमा नै गर्छन्। सबै समय सिलना छन्। त्यसपछि पार्श्व स्लाइस गोप्य जिप मा सिलना।
छेउमा कट बाँकी सी। त्यसपछि, दुई पटक उत्पादन तल sews tucked। सबै कुरा पूर्ण तयार छ। तपाईं तुरुन्तै प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। उल्टो pleats यो स्कर्ट अलिकति flared र मात्रा छ। तर तपाईं एक सख्त र पेन्सिल स्कर्ट बनाउन सक्छ। यो थप छलफल गरिनेछ।
अर्को बाटो मा एक स्कर्ट सी
स्कर्ट pleated स्कर्ट आधारित प्रत्यक्ष कलम टकराने वा पर्याप्त बाक्लो सामाग्री को गर्नुपर्छ। र मोडेल seamstress इच्छुक overpower गर्न असम्भाव्य छ। यो व्यवसायीक सिलाई विश्वास गर्न राम्रो छ। तर, अगाडि उल्टो pleats संग स्कर्ट एक समलम्ब ढाँचा आधारमा सिलना गर्न सकिन्छ। यो एकदम सजिलै गरिन्छ। यो गर्न, अगाडि यसको उल्टो pleats पूरक गर्न ढाँचा र केवल एक स्कर्ट लिन। यो उद्देश्य लागि, नमुना गरिन गर्न अनुदैर्ध्य खण्ड आवश्यक छ। तपाईं पनि Folds को चौडाई गर्न पत्राचार जो को चौडाई यसलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
स्कर्ट छोराछोरीको मोडेल लागि सबै भन्दा राम्रो हो सी सिक्नुहोस्। त्यसैले पहिले आफ्नो बच्चा रम्न र त्यसपछि जान आफ्नो मोडेल बनाउन।
आफ्नै हातले सृष्टि कुरा रोचक तस्बिरहरू
उल्टो pleats, फोटो संग एक संयुक्त वस्त्र स्कर्ट लेख मा प्रस्तुत छ, जो संग? Flared मोडेल एक तंग-फिटिङ टी-शर्ट संग लगाउने वा सख्त ब्लाउज पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर सीधा स्कर्ट प्रकाश पारदर्शी ब्लाउज वा sleeveless turtleneck संग संयोजन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। र प्ले र कपडा बनावट र कार्यान्वयन को जटिलता आवश्यकता। त्यसैले, बाक्लो सामाग्री को स्कर्ट प्रयोग गर्दा एक उच्च कलर संग उज्यालो ब्लाउज लगाउने गर्नुपर्छ।
उल्टो pleats संग सुन्दर स्कर्ट कुनै पनि महिला को दराज मा एक अपरिहार्य कुरा हुन्छन्। यो मोडेल मात्र सजाउनु, तर पनि यस्तो पनि बोसो वा पातलो जांघों रूपमा कमजोरीको लुकाउँछ छैन, waistline accentuates।
उल्टो pleats संग अपरिहार्य स्कर्ट र Schoolgirl को दराज मा हुन। यो मोडेल यसको मालिक को एक गाढा आकर्षण दिन हुनेछ, तर यो व्यवसाय छवि बिगार्छ छैन।
उल्टो pleats लामो स्कर्ट साँझ सम्पन्न मा राम्रो हेर्न हुनेछ। यो पनि प्रकाशन वा जवान संग मिति मा उपयुक्त छ।
महिला दराज यो सिजन धेरै आधुनिक कुरा समावेश गर्नुपर्छ, र एक उल्टो pleats संग स्कर्ट हुनुपर्छ। आफैलाई हुन सक्छ यो मोडेल सी। कसरी यसलाई के गर्ने? हामी हाम्रो लेखमा वर्णन गरेका छन्।
विषय मा सुन्दर हात बनाएको लेख "शरद" पास्ता
बल को हृदय: कसरी बनाउने?
राजधानी तीव्रता - कि अवधारणा हो?
अन्डा सारा मासु र कीमा संग Meatloaf
कसरी Foxy आकर्षित गर्न। चरण-दर पाठ
चीन मा मई मा बिदाहरू। मे 1 चीन मा एक छुट्टी? मई9चीन मा एक छुट्टी?
मास्टर kanzashi Alina Boloban
सुन्दर, तर एक पाइप सपना। समस्या पाइप सपना
स्वाद डा मार्कस: कार लागि सुगन्धित उत्पादनहरु
Muladhara चक्र। हृदय चक्र। को Chakras को रंग